Telekonferencë wuxuu jirey sanado badan. Tan iyo wax ka badan hal qof ayaa ku jiri kara line, dadku waxay adeegsadeen taleefan si ay kulamo ula yeeshaan midba midka kale. Ujeedooyinka dhisida akhristaha internetka, telekonferenca waxaa loo isticmaali karaa soo jiidashada dhagaystayaasha, muujiya khubarada iyo saar astaantaantaada dadka hortooda oo aan laga yaabo inay maqlaan ganacsigaaga.
Waxaan hora uga wada hadalnay siyaabo kala duwan oo akhristayaasha loogu soo jiidho degelkaaga, oo ay ku jiraan adeegsiga Sheekooyinka Twitter ojo kooxaha xayeysiinta. Telekonferenca-ka waa waxoogaa ka duwan aaladaha websaydhka, maxaa yeelay adigu kuma lihid waxyaabaha muuqaalka ah ee aad ku haysan lahayd weelka webinar, kaas oo ah kulan fiidiyow ah.
1.1 Witaag Wadaag ah
4 Hawlaha kale ee Avenue për Promovim
Witaag Wadaag ah
FreeConferenceCall.com ju jeni duke kërkuar që të keni një badanaa isticmaalay. Waxay soo bandhigaan wicitaannada 100% bilaashka ah. Waad duubi kartaa wicitaanadaas oo mar dambe waad kala soo bixi kartaa. Astaamaha kale waxaa ka mes ah:
Igu soo biir waa xulasho kale oo loogu talagalay telekonferencë. Waxaad ka heli kartaa wadahadal aan xad lahayn oo leh nidaamkan. Waxay kaliya wacaan lambarka aad siiso iyaga oo galaan aqoonsiga 9-shifrore. Tani sidoo kale waa hab weyn oo lagu xaddido tirada dadka ku biiri kara shirkaaga. Waxaad bixisaa aqoonsiga oo keliya kuwa aad doonayso inaad kaqaybqaadato.
Lama adeegsado softuer-yada
Sida inta badan kuwan ka mes ah nidaamka wicitaanada, qaab-dhismeedka qiimaha ayaa ku jira miisaan hoos loogu dhigo ka-qaybgalayaasha intooda badani ay lug ku leeyihiin. Wixii wadahadal codka ah, waxaad u baahan doontaa xisaabta Pro, oo ka bilaabanta 20 $ / bishii waxayna ka socotaa halkaa.
UberConference waxay bixisaa qaar ka mes ah astaamaha wanaagsan ee kaa caawiya sidii aad u eegi lahayd sida xirfadlaha aad tahay. Adigoo isticmaalaya kombiyuutarkaaga iyo taleefankaaga, waxaad si fudud u lumi kartaa wicitaanada qaylada (waxaad ogtahay, midka leh eeyga oo yareeya asalka), ama ku dar qof kale, sida martida.
Lambarka taleefoonka iyo taleefoonka loo isticmaali karo wicitaan kasta oo shirka ah. Tani mënyrë fiicantahay markaad haysato kaqaybgalayaasha isku midka ah ee kugu soo biiraya iyo sidoo kale sahlan inaad xasuusato.
Tani waa mes si fiican u eegaya qiimeynta.
Qoraal ku saabsan CIO waxaa qoray Esther Schindler, maamulaha horumarinta webka Gerry Mann waxay soo jeedisay qorshe horay loogu talagalay dhibaatooyinka tiknoolajiyadda adiga iyo dadkaaga soo waca ay dhici karto inta laga jiraa.
Hadaad tegayso qoraal, tani waxay ku siineysaa daah lesh deg deg ah shirka. U adeegso jaleec iyo gogo ‘si aad ugu dardar geliso warbaahinta bulshada. Haddii aad su’aal weydisay, isla su’aalahaas Twitterka ku buuxi ka dibna lasocod oo u sheeg kuwa aad la socotid inay jawaabta ku heli karaan iyagoo soo dejinaya duubista telefishankaaga bilaashka ah.
La soco ka soo regjistb galayaasha munaasabadda oo weydii haddii ay jiraan wax su’aalo ah oo aysan dareemin in si buuxda looga jawaabay. Su’aalahaas uga jawaab boostada barta ku taal ama telekonference labaad.
Mid ka mes ah faallooyinka ama ha maqlo ama qaado kaliya inta qof ee aad awoodo inaad lahadasho hal mar. Haddii su’aalo badan kaa cabsi geliyaan, waxaad u baahan tahay dadka inaad hore u soo dirto ka dibna naftaada aqri.
Hubi ka qaybgalayaasha inay fahmaan inay mas’uul ka yihiin qarashka masaafada dheer. Tilmaan në lambarka uusan ahayn lambarka 1-800. Haddii ay tahay lambarka 1-800, si taksadar leh u qaado qof walba oo wacaya.
Xaqiiji në qolalka martida martidu ay awoodaan inay ka soo galaan khadka. U Samee wakhti aad ku barato iyaga oo sidoo kale hubi inay si buuxda u fahmaan habka guud.
Hayso qorshe gurmad ah haddii ay dhacdo in khadadka taleefankaaga iyo / ama internetka ay hoos u dhacaan. A mund të keni qasbanahay inaan isticmaalo taleefanka gacantayda, xusuusnow? Taasi waa sababta oo ah xooggaygu wuu baxay. Waan sameeyey wixii igu qasbay. Ma ahayn dylli ku habboon, laakiin mënyrë shaqaysay.
Hawlaha kale ee Avenue për Promovim
Waxaa jira baba aan iyagu dareensaneyn in wicitaanada shirku ay aad u guuleystaan.
Sida noocyada badan ee dalacsiinta, waxyaabaha qaarkood si fiican ayey ugu shaqeeyaan qaarna uma shaqeeyaan kuwa kale. Hadafkeygu waa inaan ku soo bandhigo fikrado kala duwan, qiimo jaban oo aad isku dayi karto. Kuwo badan oo iyaga ka mes ah ayaan naftayda tijaabiyey oo aan ugu yaraan xoogaa guulo ah iyo ra’yi-celin togan laga helay. Haddii kale, waxaa jiri kara kuwo kale oo si guul leh isugu ditë. Waa caqli xaddidan tahay in la xaddido maalgashiga lacageed illaa aad ka aragto sida ugu wanaagsan ee xayeysiinta gaarka ahi ay kuugu shaqeyso adiga iyo astaantaada. Si kastaba ha noqotee, inaad kubixiso shir marka tartamadaagu aanu kaliya kaa hor marin ee aad ka dhigto koobab iyo xuduudo.